Here-and-Now | ZAYYA
← မဖန်တီး ခဲ့၍ ဖျက်မရခြင်း အကြောင်း
အိပ်စက်ရန် သာ စုံမက် ခြင်းကြောင့် ~ →
ဒါ့ကြောင့် – ခင်ဗျား မေးခွန်း “အခု” ကို ဘယ်လို သိရမလဲ ဆိုတာ အတွက် ကျနော် ဖြေရှင်းချက် မထုတ်ပေး ပါဘူး။ အခု ခင်ဗျား ဒီစာဖတ်နေတယ်။ စကား တစ်လုံးစီ ဖြတ်သန်းသွားမယ်။ စကား တစ်လုံးချင်း၊ စာတစ်ပိုဒ် ချင်း ကျန်ရစ်ခဲ့မယ်။ ဒီအပေါ် ခင်ဗျား သိတာက “သိ” တာပဲ ရှိပါတယ်။ “အကြောင်း” ကို ပြန်တွေးရင် ခင်ဗျား “အခု” ကို သိတာ မဟုတ်ဘူးရယ်- ။ “သိစိတ်” (ဝိညာဏ) သက်သက် ဟာ “အကြောင်းတွေ” အပေါ် အခြေမတည်ဘူး – “အရှိ” အပေါ်မှာသာ အခြေတည် ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် – “အသိ” သက်သက်မှာ “ဝါဒ” မရှိဘူး။ “ဒဿန” မပါဘူး။ “ဆင်ခြေယုတ္တိ” မလိုအပ်ဘူး။ “အခု” ခင်ဗျား သိနေသလား- ခင်ဗျား “အခု” ရှိရှိသမျှအကုန် ခြုံငုံ ပါဝင်တယ်။ အခုခဏမှာတင် “အသိ” ခဏ ဟာ ပြည့်စုံတယ်။
All is Here-and-Now. No More.
Here-and-Now is in the Innocence.
“အသိ” သက်သက် ရှိနေပါ- ဒီခဏဟာ ခင်ဗျား အတွက် “အားလုံး” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် “အခုပစ္စုပ္ပန် အသိချည်း သက်သက်” ဟာ ဖြူစင်နေတာ ဖြစ်တယ် လို့ ရှေးရှေး ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆိုပါတယ်။
ခင်ဗျား အဘိဓာန်တွေမှာ “အတိတ်”၊ “ပစ္စုပ္ပန်”၊ “အနာဂတ်” ဆိုတဲ့ စကားသုံးလုံး အကြောင်း ရှာကြည့်ပါ။ “အတိတ်”၊ နဲ့ “အနာဂတ်” ကို ကောင်းကောင်း ဖွင့်ဆို နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် “အခု ပစ္စုပ္ပန်” တည့်တည့် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကိုတော့ ခင်ဗျားကို ကောင်းကောင်း ဖွင့်ပြ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးပဲ။ သူတို့ အလွန်ဆုံး ဆိုနိုင်တာက – “အတိတ်” နဲ့ “အနာဂတ်” ကြား တည့်တည့်မှာ ပစ္စုပ္ပန် ရှိတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော် ပြောလိုတာက – “အခု” ဟာ “အတိတ်” လည်း မဟုတ်သလို၊ “အနာဂတ်” လည်း မဟုတ်ဘူး။ အလားတူ – “အတိတ်” နဲ့ “အနာဂတ်” ကြားမှာလည်း မရှိဘူး။
ကြည့်ကြည့်ပါ – အတိတ်ဆိုတာ တကယ် မရှိတော့ဘူး။ အနာဂတ် ဆိုတာ တကယ် မရှိလာသေးဘူး။ တကယ် မရှိနေတဲ့ အရာ နှစ်ခု ကြားမှာ အရှိ ထင်ရှားနေတဲ့ “အခု” ဘယ်လိုမှ မတည်ရှိပါဘူး။ စင်စစ် “အခု” အရှိ ဟာ “အသိ” ကိုသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ အခုခဏတိုင်း သိနေမယ် ဆိုရင် – ခင်ဗျား အတွက် အတွေး ကို မပေးဘူး။ ဒါ့ကြောင့် “အခု”ကို ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ဖို့၊ “အခု” ကို တွေးကြည့်ဖို့ နည်းလမ်း- အကြောင်းအရာ – ဆိုတာ – အဓိပ္ပာယ် မရှိဘူး။
April 14th 2012 at 11:00 AM